Ravao ihany koa ny 13 mai | news2dago |
Ravao Ihany Koa Ny 13 Mai
news2dago 27 Febroary, 2009 08:15 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
(sary gazetiko updated)
Velom-bolo ny olona tsy tia fikomina omaly raha naheno fa niditra an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana nandrava ireo mpikomy tetsy Mahamasina.
Maro mantsy ny olona saika hivarotra omaly teo @ iny toerana iny kanefa dia nasain'ireto mpikomy nangoron'entana ry zareo ka tsy afaka nivarotra. Voatohitohina arak'izany ny fahafahan'ny hafa ka mila ny fandraisan'andraikitra avy @ mpitondra @ izay. Hetahetan'ny maro ihany koa ny hitohizan'izao fandravana izao mba hitohy hatreny @ 13 mai ihany koa. Voamarina ihany koa fa mitondra fitaovam-piadina ireto mpikomy ireto toy ny langilangy sy ny hazo lavalava hidarofana mpitandro ny filaminana dia aza manatena ny ho afamaina @ izay raha voasambotra eo. Heloka be vava tokoa ny miandry ireo olona mamono mpitandro ny filaminana am-perinasa.
Manarak'izay dia nitohy ny dinika teny @ hotely Ny Hintsy Ambohimanambola omaly saingy tsy tonga indray ny ekipan'ny tetezamita. Izay nanao be fiavy afak'omaly ka nahatonga ny teo @ fitondrana nihemotra tamin'ny ora farany tsy hamonjy ny dinika noho ny lafin'ny filaminana anatiny. Rariny ihany aloha izany satria tsy ny delegasiona nifanarahana no tonga tao fa tonga tao daholo i babay sy lovohatra ka azo antoko fa tsy hisy raharaha ho vanona akory satria olona maivava be daholo no tonga tao ka naleon'ny ankilany izany nanaja tena ny tsy hanatrika ny dinika. lol
Ny FFKM moa no nitarika ny fanelanelanana na dia efa nitsaoka an-daharana aza i Maosenera Odon Razanakolona izay filoha ny FFKM am-perinasa dia tsy niamboha adidy kosa iretsy mpiaramiasa aminy fa nanohy ny fanelanelanana hatrany na dia sarotra aza ny raharaha ny Eveka Anglikana Ranarivelo samoela Jaona indray arak'izany no nitondra teny ny FFKM omaly.
Nihaona manokana t@ ilay solontena ny firenena mikambana moa ry zareo tao @ FFKM avy eo teny an-toerana ihany. Nihaona ihany koa t@ Prezida Ravalomanana izy ary avy eo kosa dia nakeny Ambatobe teny @ Andry Rajoelina.Tsy nisy nipika kosa anefa ny dinika na dia nilaza aza ny TGV fa oe fametrahana tetezamita no tena aton-dihany teto amintsika omaly iny.
Vaovao hafa kosa dia misy migafy ny tamban-jotra ny telma fixe ankehitriny didin'ireo mpandroba @ antsy mantsy ilay tariby mivoaka avy any ambany ny tany iny ka tapaka daholo ny akamaron'ny telefona fixe eto andrenivohitra indrindra iny faritra ambohimanarina sy alarobia iny. Ny olana anefa hoy ny olona mitaraina dia tsy azo mihitsy ny tompon'andraikitra misahana ny mpanjifa ao @ 80800 fa sahirana foana ny tambajotra. Ny andro rahateo mbola ao anatin'ny krizy ka tena ilaina dia ilaina tokoa izay telefona izany.
Mihena ihany koa ny tolotra @ fahita lavitra anekehitriny ary azo lazaina fa mahamonamonaina ny mijery ny fandaharana satria dia tsy misy dikany daholo ny fandaharana mande @ tele ankehitriny tsy afaka mizapy firy koa fa efa vitsy dia vitsy sisa ny tele mandeha ka dia mionona @ izay alefany eo. Ny sasany moa dia tsy misy afatsy resaka politika no mandeha ao ny tena anefa efa boda be ihany koa ny loha mba te hijery zavatra hafa soa ihany fa nisy ilay tele LTV (fahitalavitra ara-pilazantsara) iny manala sorisory fa raha tsy izany angamba dia namidy koa io fahitalavitra io. LOL
Nanao fanambarana ihany koa ny Radio Fahazavana fa nisy nampiasa ny maridrefy 88.6Mhz omaly hariva t@ 4 ora hariva nandritra ny fandaharana mofon'aina iny mihitsy no tapaka tampoka ny radio ka lasa resaka politika fotsiny no nandeha tao. Tsy avy @ radio velively akory io fanetanana io fa avy @ ilay Ratsy hoy ry zareo. Dia efa tsy menatra intsony mihitsy ry ratsy izany ka.